'Munhu ane chishuwo chekufa': Jeff Wittek akaroverwa nekuita iyo Milk Crate Dambudziko mushure mekupora kubva mukutyisa kwengozi yedehenya - Pop-Tsika
'Munhu ane chishuwo chekufa': Jeff Wittek akaroverwa nekuita iyo Milk Crate Dambudziko mushure mekupora kubva mukutyisa kwengozi yedehenya
YouTuber Jeff Wittek akagamuchira backlash online mushure mekuyedza iyo ichangobvumidzwa Milk Crate Dambudziko . Maitiro eTikTok akarambidzwa kubva pasocial media chikuva mushure mevatori vechikamu vanoverengeka vakakuvara zvinotyisidzira hupenyu mushure mekupedza dambudziko.
Chinyorwa chakagovaniswa naJeff Wittek (@jeff)
Iwe-ane makore makumi matatu nematatu YouTuber, uyo akazove akakurumbira online mushure mekuonekwa mune akati wandei mavlogs aDavid Dobrik, akatambura kukuvara kukuru kweziso kubva pamaoko eakafukunura yaishandiswa naDobrik. Jeff Wittek akange audzwa kuti angangodaro achizotadza kuona mushure mechiitiko ichi. Nhengo yeVlog Squad yakagadzira diki diki- yakateedzana yakanzi Usaedze Izvi Pamba , umo Jeff Wittek akajekesa tsaona inotyisa uye zvakazoitika.
Jeff Wittek anogamuchira flack mushure mekuyedza Milk Crate Dambudziko
Vafudzi ve Jeff's Barbershop podcast vakanyadziswa kuona Jeff Wittek achiedza iro dambudziko raive rakonzera kuti vatori vechikamu vazviwise pachavo muEmergency Room. Kutaura nezve dambudziko, chiremba wemapfupa Dr. Shawn Anthony akadaro Iyo yanhasi Ratidza :
Kukuvara kunogona kusanganisira kutsemuka mawoko, kuputika kwepafudzi, ACL uye meniscus misodzi, pamwe nemamiriro ekutyisidzira hupenyu sekukuvara kwemuzongoza.
Kunyangwe maindasitiri emapurasitiki emakisi emakiti anogona kubata zviuru zvemapaundi ehuremu zvakasiyana, kana akaunganidzwa pamwechete mupiramidhi-senge chimiro che Mukaka Crate dambudziko , inotungamira kumakaka emukaka kurasikirwa nekugadzikana kwavo. Dambudziko revatori vechikamu kazhinji vanowira zvinosiririsa vachiyedza iro dambudziko.
Kunyangwe yambiro uye kurambidzwa kuri kuziviswa neTikTok, Jeff Wittek, akaunganidza vanopfuura mamirioni 3.14 vanyoreri pachiteshi chake cheYouTube, aifanira kuedza kugadzirisa dambudziko iri.
Muvhidhiyo, Jeff Wittek anogona kuoneka achikwira masitepisi emukaka-crate, nepo munhu achiseka achiseka kugogodza mukaka-crate chimiro pasi. YouTuber David Dobrik akanzwika mumashure achiodza moyo munhu kuti asagogodza makate emukaka pasi.
Kunyangwe Jeff Wittek akakunda iro dambudziko, vanetiweki havana kufara neYouTuber. Vazhinji vakaenda kuTwitter vachiratidza kusuwa kwavo. Mamwe makomendi aisanganisira:
@jeffwittek urikunyatso kuita izvi shit kunge iwe hauna kungowana bran kukuvara kubva kune uyu [David Dobrik] mfer
Chero chipi zvacho chababa David
Yesss ngatifashukire muzvipatara nemamwe madhiri
kwete jeff wittek ari kuita mukaka crate kupokana sekunge iye haana kungoita gwaro rese abt kuti kukuvara kwemaziso kwakachinja sei mararamiro ehupenyu hwake
- (@ ruvely_dovely) Nyamavhuvhu 30, 2021
Chinyorwa chakagovaniswa naDef Noodles (@defnoodles)
Jeff Wittek akagovana mune ake docu-akateedzana kuti iye akatsigira rakatyoka tsoka uye chiuno, akatsemuka marunda mumakumbo ake uye akange apwanya dehenya rake munzvimbo pfumbamwe dzakasiyana kunze kwekukuvara kwakakomba kwemaziso. Kunyangwe ichiita senge zvine musoro kusaisa muviri wako munzira inokuvadza mushure mekuita tsaona yakakomba, zvinoita sekunge hapana chinogona kumisa Jeff Wittek kuzviisa panjodzi.
maitiro ekuwanazve kutendwa mushure mekunyepera mumwe wako
zviratidzo zvekutorerwa mukana